अस्पतालमा पेट्रोल बम प्रहार : बिरामीको भागाभाग – Sandesh Munch
July 1, 2020 202
Prevजे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्नन सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! भिडियो सहित
Nextसाम्राज्ञी भनिन्-‘म मेरै ठाउँबाट जान्छु, मलाई चाहिएन यो युट्युब । किनकी जहिले पनि हामीलाई उचालेको छ, उडाएको छ । हामीलाई नराम्रो देखाएर पैसा कमाएको छ । अहिले पैसा कमाइरहेको छ, हाम्रोबारेमा नराम्रो लेखिरहेको छ ।’
नेपाली युवाको इराकमा दुखद निधन